Blind Nature Recordist သည်အသံဖိုင်များကို Birdsong နှင့် Soundscapes များကိုဖမ်းယူနိုင်သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » မျက်စိကန်းသောသဘာဝတရား Recordist Trusts မှအသံဖုန်းများအတွက် Birdsong နှင့် Soundscapes Capture မှ
ဘရာဇီး, စကျတငျဘာ 29, 2015 - တောင်အမေရိကရဲ့အစွန်းရောက်အပူသို့မဟုတ်အအေးပိုင်းတောင်ကြီးတောင်ငယ်လေကောင်းလေအမြဲတည်သောဖွစျစေ, သဘာဝ recordist Juan Pablo Culasso အမြဲအရည်အသွေးမြင့်ထူးခြားတဲ့ငှက်အသံနှင့် soundscapes ဖမ်းဆီးဖို့အထဲကသတ်မှတ်။ မွေးဖွားစဉ်ကတည်းကမျက်စိကန်း, အ 29 နှစ်အရွယ်ဥရုဂွေးဖွား Culasso အသံဖမ်းအပေါ်ထူးခြားတဲ့ရှုထောင့်ရှိပါတယ်။ တည်နေရာ, မိမိသေချာစေသည်လိုက်တဲ့အခါ အသံဖုန်းများအတွက်'' 788T-SSD ကို နှင့် 702 အိတ်ဆောင်ဒစ်ဂျစ်တယ် audio recording သူကအစွန်းရောက်လေထုအခြေအနေများအတွက်သာလွန်အသံဖမ်းယူဖို့သူတို့ရဲ့ရှည်လျားပြေးအချိန်နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရအပေါ်ရေတွက်သောကွောငျ့, သူ့တူးစင်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
2003 ခုနှစ်, Culasso birdsongs ဖမ်းယူ recordist တစ်ဦးသဘောသဘာဝအဖြစ်မိမိအလုပ်စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ယနေ့ညျလညျးမိမိမှတ်တမ်းတင်ထားသောသဘာဝထုတ်ဝေ, စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အချို့ကိစ္စများတွင်, သုတေသနရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသံအထောက်အကူပြု soundscapes မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။
သူကသူ့ drive ကိုနှင့်သူ့အလုပ်ကိုတစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောအပျနှံဖှယျများအတွက်မျက်မှောက်တော်မှချွတ်ယွင်းဂုဏျ။ "ကျနော့်ကမ္ဘာကသာအသံထားဖြစ်ပါတယ်" ဟုသူကဆိုသည်။ နားပတ်လည်-70 ဒီဂရီသတင်းအချက်အလက်ရရှိနိုငျစဉ်က "အမြင်အာရုံကိုလယ်ခန့် 360 ဒီဂရီဖြစ်ပါတယ်။ ဤအကြောင်းကြောင့်ငါဗျာဒိတ်ရူပါရုံကိုငါ့မရှိခြင်းငါ၏အ recordist အလွန်စိတ်အားထက်သန်သဘောသဘာဝဖြစ်လာမှလှူဒါန်းခဲ့သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ "
မိမိအရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်, Culasso ကိုလည်း 788T-SSD ကိုနှင့် 702 ရွေးချယ်မှုသည်သူ၏အသံဖမျးဖြစ်ကြောင်းအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သော, တည်နေရာပေါ်အသံဖမ်းယူ၏သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများကိုကျော်လွှားရမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ 788 နှစ်လမ်းကြောင်း, ဖိုင်-based ဒီဂျစ်တယ်အသံအသံဖမ်းဖြစ်ပါတယ်နေစဉ် 702T-SSD ကို timecode အတူခရီးဆောင်ရှစ် input ကိုတဆယ်နှစ်-လမ်းကြောင်းအသံဖမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့အနိမ့်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုမြန်ဆန် start-up အချိန်, ပေါ့ပါးခံစားခြင်းနှင့်အစိုင်အခဲဆောက်လုပ်ရေးရုံသူသည်မိမိအမကြာသေးမီခြေကျင်တောင်တက်ခရီးကြမ်းအပေါ်သူ့ကိုကူညီခဲ့ကြပြောပါတယ်သော features တွေတချို့ရှိနေပါတယ်။ Culasso မှန်မှန်ဖြည့်စွက် CL-8 Controllerအဆိုပါ 788T အဘို့, သူ့ setup ကိုမှ, သူ့ရောနှောပိုမိုထိန်းချုပ်ဘို့, အစွမ်းထက်ရောစပ်ထိန်းချုပ်မှုမျက်နှာပြင်။
"ဒီ 788T အစဉ်အမြဲငါကိုအသုံးပြုခဲ့ကြသောအကောင်းဆုံးအသံဖမ်းဖြစ်ပါတယ်" ဟု Culasso ကပြောပါတယ်။ ငါအဲဒီ options ကို configure ဖို့ menu ကိုသှားဖို့မလိုအပ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ "ဟုအဆိုပါ switches များကဲ့သို့အခြို့သောလုပ်ဆောင်ချက်ကို, တစ်ကိုယ်တော် Phantom, ကန့်သတ်ခြင်း, စကားအဖွင့်ရန်အသွင်းအားစု, တဦးကိုလက် input ကိုစစ်ဆင်ရေးမှာတကယ်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါ 702 ့ရဲ့ backup အသံဖမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာငါ့ကိုနှောင့်အယှက်မရှိဘဲအချိန်တိုးချဲ့ကာလအဘို့အလွန်မြင့်အရည်အသွေးမှတ်တမ်းတင်ဖမ်းယူဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ "
Culasso မကြာသေးမီက Emas အမျိုးသားဥယျာဉ်, Mato အဘိဓါန် Grosso များ၏ပြည်နယ်များမှာတည်ရှိပါတယ်ဧရိယာများတွင်မှတ်တမ်းတင်ရက်သတ္တပတ်အတော်ကြာသုံးစွဲ Sul နှင့်Goiás, ဘရာဇီးလုပ်ပါ။ သူသည်ဤထူးခြားသောတည်နေရာကနေပစ္စည်းအများအပြားအယ်လ်ဘမ်ထုတ်လုပ်ရန်စီစဉ်အတူအသံ၏ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 300 နာရီဖမ်းမိ။
"ငါသည် Emas တှငျမှတျတမျးတငျထားသသောအခါ, အပူချိန် 110 ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ထက်ပို၏အထက်သို့ရောက်ရှိ" ဟုသူကပြန်ပြောပြသည်။ "ဒီ အသံဖုန်းများအတွက် 788T နှင့် 702 ပင်ထိုကဲ့သို့သောကြမ်းတမ်းသောအခြေအနေများအတွင်းအလွန်အမင်းကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ပင်စိုထိုင်းဆအလွန်မြင့်မားသည်အဘယ်မှာရှိသနည်းနက်ရှိုင်းသောအမေဇုံမိုးသစ်တောထဲမှာ, အစက်တွေစုံလင်သောအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ "
မိမိအမျက်စိကွယ်နေတဲ့အသံကပရော်ဖက်ရှင်နယ်များအတွက်အဓိကအတားအဆီးနဲ့တူပုံရပေမည်နေစဉ်, Culasso ကပါဝငျ။ သူကပုံမှန်အားဖြင့်အဆိုပါနေရာများအဖြစ်ကသူ၏ပစ္စည်းကိရိယာများအပေါ်ခလုတ်နဲ့ menu ကို Workflows ၏ပုံစံမျိုးစုံ memorizes ။ သူကမကြာခဏအများအပြား ISOs အသုံးချလျက်, CL-8 အတူရောနှောဖန်တီးပေးပါတယ်။ အခါသမယတွင်သူဖြစ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးကိုပတ်ဝန်းကျင်အသံသွင်းဖမ်းယူဖို့ 100 ခွကေိုကွာသည်သူ၏မိုက်ခရိုဖုန်းကိုတင်ထားရန်ရှည်လျား XLR ကြိုးတွေအသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။ အားလုံးသည်သူ၏ Culasso အသံဖုန်းများအတွက် ပုံမှန်အား Sennheiser သို့မဟုတ် Telinga MICS ရွေးချယ်ရာတွင်တိကျသောစီမံကိန်းနှင့်အခြေအနေပေါ် မူတည်. MICS အမျိုးမျိုးနှင့်အတူအသံဖမျး, ။
Culasso ဒီနှစ်နှောင်းပိုင်းတောင်ဝင်ရိုးစွန်းမှခရီးသွား, သူ၏လိမ့်မည် အသံဖုန်းများအတွက် ဂီယာယျတျောနှငျ့အတူညာဘက်ရှိရလိမ့်မည်။ "တောင်မှနွေရာသီအတွက်အခြေအနေကအရမ်းခက်ခဲဖြစ်လိမ့်မယ်" ဟုသူကဆိုသည်။ "ငါသည်ငါ၏ယုံကြည်မှုဖြစ်၏ အသံဖုန်းများအတွက် အသံဖမျးမည်သည့်ပြဿနာမျှမရှိဘဲလက်မှာတာဝန်ပြီးမြောက်ပါလိမ့်မယ်။ "
အဆိုပါ အသံဖုန်းများအတွက်, LLC ဌာနချုပ် Reedsburg, Wisconsin ပြည်နယ်တွင်တည်ရှိသည်။ အပိုဆောင်းရုံးများ Madison, Wisconsin ပြည်နယ်, ချီကာဂိုနှင့်ဘာလင်တွင်တည်ရှိပါသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကအဘို့, သွားရောက်လည်ပတ် အသံဖုန်းများအတွက် နှင့်ဗီဒီယိုဖုန်းများအတွက်ဝက်ဘ်ဆိုက်များ: www.sounddevices.com နှင့် www.videodevices.com.
isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော အသံဖုန်းများအတွက် တီဗီနည်းပညာ 2015-09-29
ယခင်: မာဂရီးရောနှောစန်တာမော်နီကာ 2015 Telly ဆုပေးပွဲဆွတ်ခူး
နောက်တစ်ခု: Trilogy ကိုချဲ့ထွင်အရှေ့အလယ်ပိုင်းရောက်ရှိခြင်း